Tarehimariky ny CENI - Fifidianana ben’ny tanana :: Telo amby fitopolo sy roanjato sy arivo ny isan’ireo kandidà manerana ny Nosy • AoRaha
Tarehimariky ny CENI – Fifidianana ben’ny tanana Telo amby fitopolo sy roanjato sy arivo ny isan’ireo kandidà manerana ny Nosy
Araka ny tarehimarika nampitain’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), omaly, tamin’ny dimy ora hariva dia mahatratra telo amby fitopolo sy roanjato sy arivo ny isan’ireo kandidà nanatitra ny taratasy firotsahan-kofidiana manerana an’i Madagasikara.
Kaominina miisa telopolo sy fitonjato amin’ireo kaominina dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo manerana ny Nosy no nirotsahan’ireo kandidà ireo. Izany hoe mbola tsy ampy antsasa-manilan’ireo kaominina eto Madagasikara no misy kandidà.
Manoloana izany dia nandefa taratasy tany amin’ny governemanta mampahalala ny fisian’io olana momba ny fahavitsian’ny kandidà io ny Ceni. Mifototra amin’ny fandresen-dahatra ny rafitra mpanatanteraka hanome fanalavam-potoana hahafahan’ireo kandidà hanatitra ny antontan-taratasy no anton’izany. « Tsy tokony hihoatra amin’ny alahady izao kosa anefa io fe-potoana io », hoy Rakotondrazaka Fano, mpampaka-tenin’ny Ceni, omaly.
Fanampian’ny fanjakana Takian’ny firaisamonim-pirenena ny hijerena an’ireo ivelan’ny ara-dalàna
Fanelingelenana fifamoivoizana :: Miverina ny gaborarak’ireo mpitarika sarety sy posy
Fifidianana ben’ny tanana :: Olom-baovao vonona hanarina an’Iarivo i Naina Andriantsitohaina